19 Bere a na ɔhene biara nni Israel no,+ na Lewini bi te Efraim+ bepɔw so akyirikyiri baabi. Bere bi akyi no ɔfaa ɔyefam+ bi fii Betlehem+ wɔ Yuda. 2 Nanso ne yefam no anni no nokware na ofii ase bɔɔ aguaman.+ Afei ababaa no tu fii ne nkyɛn kɔtenaa ne papa fie wɔ Betlehem a ɛwɔ Yuda, na odii hɔ asram anan. 3 Na ne kunu no tiw no sɛ ɔne no rekɔka no bɔkɔɔ na wasan de no aba. Ná ne somfo+ ne mfurum abien ka ne ho, na ababaa no de no kɔɔ ne papa fie. Bere a ababaa no papa huu aberante no, ɔde anigye hyiaa no. 4 Na n’ase a ɛyɛ ababaa no papa no gyee no kaa ne nkyɛn nnansa, na wodidi nomee, na ɔdaa hɔ.+ 5 Afei da a ɛto so anan no, wɔsɔree anɔpatutuutu, sɛnea wɔyɛ daa no, na osiesiee ne ho sɛ ɔrekɔ, nanso ababaa no papa ka kyerɛɛ n’ase no sɛ: “Fa biribi kakra ka w’ano+ ansa na moakɔ.” 6 Enti wɔtenaa ase, na wɔn baanu didi nomee. Afei ababaa no papa ka kyerɛɛ aberante no sɛ: “Mesrɛ wo, da ma ade nkye+ na dwudwo wo ho.”+ 7 Bere a aberante no sɔree sɛ ɔrekɔ no, n’ase no paa no kyɛw ma ɔsan dae.+ 8 Da a ɛto so anum a ɔsɔree anɔpahema sɛ ɔrekɔ no, ababaa no papa san kae sɛ: “Mesrɛ wo, pɛ biribi dwudwo wo ho.”+ Enti wɔtenatenaa hɔ ara ma onwini dwoe, na wɔn baanu didii. 9 Afei aberante+ no sɔree sɛ ɔne ne yefam+ ne ne somfo+ no rekɔ. Nanso n’ase a ɛyɛ ababaa no papa no ka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ, onwini adwo na ade reyɛ asa, enti mesrɛ wo, monna.+ Owia akɔtɔ enti da na dwudwo wo ho+ na ɔkyena moasɔre anɔpahema asim akɔ mo ntamadan mu.” 10 Nanso aberante no ampene sɛ ɔbɛda, enti osiim kɔe koduu Yebusi+ anaa Yerusalem+ ntentenso, ɔne ne mfurum abien a wahyehyɛ wɔn ne ne yefam ne ne somfo no. 11 Bere a wɔbɛn Yebusi no, na ade asa ara ne sa,+ na ɔsomfo no ka kyerɛɛ ne wura sɛ: “Ma yɛmman nkɔ Yebusifo+ kurow yi mu nkɔda hɔ.” 12 Nanso ne wura no ka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛrenkɔ ananafo+ a wɔnyɛ Israelfo kurom. Ma yentwam nkɔ Gibea.”+ 13 Na ɔtoaa so ka kyerɛɛ ne somfo no sɛ: “Ma yɛmmɛn nkurow yi mu biako na yɛnkɔda Gibea anaa Rama.+” 14 Enti wɔtoaa so kɔe, na bere a wɔbɛn Benyaminfo kurow Gibea no, na owia rekɔtɔ. 15 Enti wɔman sɛ wɔrekɔda Gibea. Na wɔkɔtenaa kurow no abɔnten, nanso wɔannya obiara ammɛfa wɔn ankɔ ne fie sɛ wɔnkɔda hɔ anadwo no.+ 16 Akyiri yi, akwakoraa bi a ofi afuw mu reba anwummere+ no bepuee hɔ. Ná ofi Efraim+ bepɔw so na wabɛsoɛ Gibea kakra, nanso kurom hɔfo de, na wɔyɛ Benyaminfo.+ 17 Bere a ɔmaa n’ani so no, ohuu aberante kwantuni no sɛ ɔte kurow no abɔnten so. Na akwakoraa no bisae sɛ: “Wufi he, na ɛhe na worekɔ?”+ 18 Ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yefi Betlehem a ɛwɔ Yuda, na yɛrekɔ Efraim+ bepɔw so nohoa. Ɛhɔ na mifi, na mibetwaam kɔɔ Betlehem a ɛwɔ Yuda no;+ afei na merebɛsen akɔ me fie, nanso minnya obiara mfa me nkɔ ne fie.+ 19 Mewɔ aduan+ a me mfurum no bedi, na me ne w’afenaa+ ne ɔsomfo+ a ɔka w’akoa ho yi nso wɔ aduan+ a yebedi ne nsã a yɛbɛnom. Biribiara nhia yɛn.” 20 Ɛnna akwakoraa no kae sɛ: “Asomdwoe nka wo!+ Afei sɛ wuhia biribi a, bisa me,+ na abɔnten so ha de, nna ha.” 21 Ɛnna ɔde no kɔɔ ne fie+ na ɔmaa mfurum no aduan.+ Afei wɔhohoroo wɔn nan ase+ na wofii ase didii na wɔnomee. 22 Wogu so redwudwo wɔn ho no,+ kurom hɔ mmarima ahuhufo+ bi betwaa fie no ho hyiae,+ na wopiapiaa wɔn ho wɔ pon no ano; na wɔka kyerɛɛ ofiewura akwakoraa no sɛ: “Yi ɔbarima a ɔbaa wo fie ha no bra na yɛne no nna.”+ 23 Nanso ofiewura no pue ne wɔn kɔkasae+ sɛ: “Me nuanom,+ mesrɛ mo, monnyɛ bɔne a ɛte sɛɛ, efisɛ ɔbarima no abɛsoɛ me. Monnyɛ aniwude a ɛte saa.+ 24 Me babea a ɔyɛ ɔbaabun ni, na ɔbarima yi nso yefam ni. Momma memfa wɔn mmrɛ mo na mo ne wɔn nna+ na monyɛ wɔn nea mopɛ. Na ɔbarima yi de, mommfa aniwude ne nkwaseade a ɛte sɛɛ nnyɛ no.” 25 Nanso mmarima no antie no. Enti ɔbarima no de ne yefam+ no kɔmaa wɔn wɔ abɔnten hɔ na wɔne no dae,+ na wɔyɛɛ no basabasa+ anadwo mũ no nyinaa ma ade kyee. Na anim retetew no, wogyaa no ma ɔkɔe. 26 Na anim baee kakra no, ɔbea no bae, na ɔbɛhwee ɔbarima no fie kwan ano, faako a ne wura wɔ no,+ na ɔdaa hɔ kosii sɛ anim tetewee. 27 Akyiri yi ne kunu sɔree anɔpa kobuee pon no sɛ ɔrepue akɔ. Afei ɔnkɔhwɛ a, ne yefam+ no na ɔda ofie no abobow ano a ne nsa gu pon no ano yi! 28 Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Sɔre ma yɛnkɔ,” nanso kranaa.+ Na ɔbarima no faa no too afurum so kɔɔ ne kurom.+ 29 Afei oduu fie no, ɔfaa sekan twitwaa ne yere no mu asinasin dumien,+ n’apɔw so n’apɔw so, na ɔde kɔɔ Israel nsase nyinaa so.+ 30 Na obiara a ohui no kae sɛ: “Efi bere a Israelfo fi Egypt bae yi, biribi a ɛte sɛɛ nsii da na yenhuu bi saa da. Munnwen ho, momfa ho adwene+ na monka ho biribi.”